Backpack banner bhajeti vhezheni ndeye yakakwirira maitiro asi inodhura inoshanda yekushambadzira chishandiso chekusimudzira muboka.Yakagadzirwa kubva kuzvinhu zvisingaremi, asi zvinogara, mabhenji anopfekeka ari nyore kutakura.Nechiziviso chemureza chakadhindwa kumashure, unogona kusunungura maoko ako uye kutumira mabhurocha, mapepa kana zvipo.
Mubatanidzwa unochinjika wezvimiro zvishanu zvemureza mune imwe mureza - mureza we feather, teardrop flag, recatangel flag, arch flag, paddle flag.
Bhegi rinofamba mureza rinogona kushandiswa kukwezva traffic inopfuura kana kuratidza bhizinesi rako kana sangano pazviitiko, kutengeserana show senge fetes nemisika kana dzimwe nzvimbo dzakabatikana.
Yedu Backpack banner bhajeti vhezheni ndeye yakakwira maitiro asi inodhura inoshanda yekushambadzira chishandiso chekusimudzira muboka.Yakagadzirwa kubva kuzvinhu zvisingaremi, asi zvinogara, mabhenji anopfekeka ari nyore kutakura.Nechiziviso chemureza chakadhindwa kumashure, unogona kusunungura maoko ako uye kutumira mabhurocha, mapepa kana zvipo.
Flexible kusanganiswa kwezvimiro zvishanu zvemureza mune imwe mureza danda - feather mureza, teardrop mureza, recatangel mureza, arch mureza, paddle mureza.
(1) Yakareruka uye inotakurika, yakakura uye yakasarudzika nzira yekushambadzira kwenhare
(2) Imwe bhegi ine danda sutu ye5 mureza maumbirwo, kuchengetedza mutengo uye nzvimbo yemasheya.
(3)Muulded 3D-foam backpanels inoita senge yekutsikirira uye inobvumira kuyerera kwemhepo pakati pebackpanels uye kumashure, iyo inogona kupa yakasununguka kushandisa ruzivo.
(4) Yakakosha homwe yemapango uye mesh homwe / hoko dzemabhurocha, bhodhoro remvura nezvimwe.
(5)Kuwedzera bhandi rizere nesiponji kuitira zvirinani kushandisa ruzivo
(6)Mabhandi pabhandi anodzivirira bhegi kuti risazembere nemhepo ine simba.
(7)Oxford zvinhu zvinoita kuti bhegi rinyanye kuomarara kwekushandisa kwenguva refu.
(8) carbon composite pole.
Item code Mureza size Kurema kurongedza saizi
BBDSHF S(munhenga) 122x51cm 0.8KG 50*38*5.5CM
F (misodzi) 103x52cm
Zvakapfuura: Backapck Board
Zvinotevera: Backpack HDPE